तपाईं एक प्रयोगकर्ता सबैभन्दा उपयुक्त महसुल चयन जडान भने पनि यो अझै पनि अन्ततः यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र धेरै कारण के हुन सक्छ: ग्राहक आवश्यकता को परिवर्तन, त्यहाँ कम्पनी थप रोचक प्रस्ताव, र थप छन्। तर महसुल "मेगाफन" परिवर्तन गर्नु पहिले यसको आफ्नै साइटमा पिक अप प्रदान गर्दछ।
तपाईंलाई एउटा विशेष कैलकुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ "को महसुल छान्नुहोस्।" यहाँ तपाईं आफ्नो कल र के संचालक अक्सर कल, साथै अतिरिक्त सेवाहरू प्रयोग फ्रिक्वेन्सी बनाउन जो संख्या औसत अवधि निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ। केही प्रतिबिम्ब पछि कार्यक्रम मिल्ने शुल्क सूची प्रदर्शन गर्नेछ। तपाईं ध्यान दिएर सबै विकल्प पढ्न भने, तपाईं सबै भन्दा राम्रो प्रस्ताव चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
उपयुक्त विकल्प चयन गरेपछि, यसलाई अर्को महसुल "मेगाफन" स्विच गर्न कसरी सिक्न मात्र रहनेछ। कलर आफ्नो रुचिको बिल्कुल निश्चित छ भने, त्यो कुनै थप प्रश्न, सजिलो र थप आफैलाई गर्न सुविधाजनक थियो। यो पूरा गर्न सकिन्छ कि त सेवा गाइड, सेवा मार्फत, वा USSD * 105 * 20 # मार्फत। तपाईं पनि महसुल योजना परिवर्तन मा कम्पनीको वेबसाइटमा आफ्नो आवेदन पेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस अवस्थामा, तपाईं अझै पनि केही प्रश्नहरू रहने वा तपाईं आफ्नो दर चयन गर्न सक्दैन भने, सेवा कार्यालयमा सम्पर्क केन्द्र मा कम्पनी को विशेषज्ञहरु को सहायता खोजी, वा सीधा गर्नुपर्छ। तिनीहरूले मात्र चयन संग छैन मदत गर्नेछ, तर पनि आफूलाई महसुल योजना परिवर्तन गर्नेछ। मुख्य कुरा हो - एक पासपोर्ट छ।
Whichever विधि अर्को महसुल "मेगाफन" जान चुनिएको गरिएको थियो, परिवर्तन निम्न दिन, मास्को समय सम्म हुन छैन। र प्रिपेड यातायात भने, यो महिनाको सुरुमा पुरानो दरमा प्रदान गरिएको छ मात्र देखि छ। दर परिवर्तन गर्नु अघि, यो सबै पहिले जडान सेवा काम कि स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। यदि तिनीहरूले नयाँ महसुल द्वारा समर्थित छैनन्, तिनीहरूले स्वतः बन्द हुनेछ। को महसुल पहिले नै जडान रोकियो भने, त्यसपछि परिवर्तन सम्भव छैन। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अर्को महसुल "मेगाफन" स्विच प्रत्येक सदस्य, त्यसपछि यो सेवा शुल्क को पूर्ण मुक्त, बिना परिवर्तन को चुनिएको विधि को प्रदान गरिएको छ हुनाले।
तैपनि, हामी महसुल परिवर्तन गर्न हतार गर्नु हुँदैन। तपाईं बस महसुल विकल्प जडान गरेर, अर्को तरिकामा आफ्नो लागत कम गर्न सक्छ। आज कम्पनी एक दर्जन भन्दा बढी यसको ग्राहकहरु प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले तपाईं आफ्नो आवश्यकता, कहिलेकाहीं पनि अल्पकालीन फिट गर्न उपलब्ध दर अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं एक दिन को लागि असीमित इन्टरनेट आवश्यक वा कल रोमिङ मा छुट लागि अनुरोध छ भने, त्यहाँ अर्को महसुल "मेगाफन" स्विच गर्न कसरी सिक्न जरूरी छैन।
तपाईं बस चाहेको विकल्प जडान गर्न सक्नुहुन्छ। र बित्तिकै यस्तो सेवाहरूको लागि आवश्यकता अनावश्यक हुनेछ रूपमा - असक्षम। यसरी दर अपरिवर्तित रहन्छ।
जो सदस्य दर आज, शायद भोलि नयाँ प्रस्ताव हुनेछ र यो लाभदायक हुनेछ। त्यसैले, यो हात मा अर्को महसुल "मेगाफन" र कसरी सबैभन्दा लाभदायक विकल्प चयन गर्न स्विच गर्न कसरी एक ज्ञापन गर्न मनमोहक छ। मात्र त कल र एसएमएस को आफ्नो नम्बर घटाउने बिना संचार मा सुरक्षित हुनेछ।
वर्ल्ड वाइड वेब के हो?
एक "मेघाफोन" को रूपमा फिर्ता कल गर्न अन्य पार्टी सोध्न?
विवाह Ivana Groznogo राजा (छोटो)
कारणहरू र नतिजा: aching भुँडी भने
प्रतिभाशाली chansonnier Arkady Kobyakov। लेखकको जीवनी र एल्बमहरूको सूची
जहाँ यो डिसेम्बर मा न्यानो छ, वा जहाँ हिउँदमा जाने?
जहाँ यसलाई नगद एक ऋण लिन लाभदायक छ? उपभोक्ता क्रेडिट को प्रकार
Frosted ग्लास: व्यक्तिगत भित्री सजावट
अभिनेत्री Elena Kalinina: जीवनी, परिवार, थिएटर र फिल्म कामहरू